Fikarohana momba ny firaisana Raharaha famerenan-tena amin'ny Harriet Tubman | Angela Davis: Operation militaire ho an'ireo afrikana amerikana afrikanina amin'ny androm-piainana roa - fikarohana Reincarnation
Ny fiainan'i Harriet Tubman
Harriet Tubman Teraka tany Maryland, tao amin'ny fanandevozana, ny volana martsa 1822. Niala tamin'ny tompony izy, izay nikapoka sy nikapoka an'i Tubman ny mpiasan'izy ireo, ary lasa mpamongady tena malaza noho ny fikarakarana iraka 13 mba hanavotana ny 70 hafa voafatotry ny fanandevozana. Vonona ny hampiasa hery izy, raha ilaina, ary mitondra revolver.
Ny tamba-jotra-trano famongorana azy sy ny trano azo antoka, izay nisy ny andevo mandositra, dia nantsoina hoe Lalamby lalamby.
Harriet Tubman sy John Brown
Nandositra tany Philadelphia i Tubman tamin'ny voalohany izay tsy ara-dalàna ny fanandevozana. Niverina tany Maryland izy avy eo mba hitondra ny havany, vondrona iray isaky ny mandeha, mankany Philadelphia sy fahafahana. Hanatanteraka ny iraka ataony amin'ny alina izy ary mitazona tsiambaratelo mba tsy ho tratra.
Tamin'ny taona 1858, dia nihaona tamin'i John Brown i Tubman, izay nanampy tamin'ny famolavolana sy famonoana ny fanafihana nataon'ny tafika amerikanina tao amin'ny tanànan'i Harpers Ferry, Virginia. Brown, izay fotsy sy finaritra amin'ny fanandevozana, dia nikasa ny hampiasana ny fitaovam-piadiana nalaina tamin'ny arsenal mba hamoronana vondron'olona andevo manafaka any amin'ny tendrombohitr'i Virginia sy Maryland.
Voasambotra nandritra ny fanafihana i Brown, izay nitranga tamin'ny 1859, ary izy no nahantona tamin'ny faran'ny taona. Ny fanafihana ny Harpers Ferry dia nampitombo ny tahotra ny tompon'ireo andevo any atsimo fa hisy ny fikomiana andevo, ary nitombo ny fifandonana teo amin'ireo fanjakana avaratra sy atsimo alohan'ny ady an-trano amerikana, izay nanomboka tamin'ny 1861.
Vantany vao nanomboka ny ady an-trano, Harriet Tubman dia nalain'ny tafika avaratra avy amin'ny tafika avaratra ho mpahandro, avy eo mpitsabo, mpanamory tafika ary mpitsikilo.
Harriet Tubman no nitarika ny fanafihana nataon'ny Tafiky ny Reniranon'i Combahee River
Tamin'ny 1863, i Tubman no vehivavy voalohany nitarika fanafihana mitam-piadiana nataon'ny tafika Union tany amin'ireo faritra avaratra nandritra ny Ady Sivily. Io fanafihana tany South Carolina io no nahatonga ny fanafahana ny andevo mihoatra ny 750. Misy lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia mamaritra ny zava-misy eo amoron'ny Reniranon'i Combahee.
“Raha vantany vao tonga teny amoron-tsiraka izy ireo dia nandoro ireo toeram-pambolena ireo tafiky ny firaisana, nanimba ireo fotodrafitrasa ary naka sakafo sy kojakoja an'arivony dolara. Rehefa mavesatra ny tadiny ny steamboats dia fantatr'ireo andevo nanerana ilay faritra fa navotsotra.
Nijery i Tubman raha nandehandeha nankany amin'ny sambokely ny andevo. 'Mbola tsy nahita fahitana toy izany aho,' hoy izy taty aoriana, manoritsoritra ny fisehoan-javatra feno korontana amin'ireo vehivavy mitondra vary mbola mahamay, kisoa mihetsiketsika ao anaty sakaosy mihantona eo an-tsoroka, ary zazakely mihantona amin'ny vozon'ny ray aman-dreniny. Na dia nanandrana nanakana ny fandosirana ny besinimaro aza ny tompony, nirongo basim-borona sy karavasy, dia saika tsy nisy nilana azy ireo ny fiezahana. Rehefa nihazakazaka nankany amin'ilay toerana ny tafika mivondrona, nisy sambo feno setroka feno andevo niainga nankany Beaufort. ”
Maty i Tubman tamin'ny 10 martsa 1913. Tamin'ny taona 2019 dia nisy horonantsary iray natao momba ny Zoany Harriet.
I Angela Davis ho Reincarnation Harriet Tubman
I Harriet Tubman dia namolavola indray Angela Davis, vehivavy amerikana afrikanina teraka tamin'ny 26 Janoary 1944, 31 taona taorian'ny nahafatesan'i Tubman.
I Davis dia mizara ny maro amin'ireo toetran'i Harriet Tubman. Ohatra, toa an'i Tubman, nisokatra ny fampiasa herisetra ho an'ny antony ara-tsosialy i Davis. Tamin'ny taona 1970, nividy fitaovam-piadiana izay nampiasaina tamin'ny fakana fitaovam-piadiana tao amin'ny efitrano fitsarana tao Marin County, California, izay ao avaratr'i San Francisco ihany izy.
Novonoin'i Jonathan Jackson, amerikana afrikana, ny fikasana haka an-keriny ny mpitsara ny Fitsarana ambony, Harold Haley, izay hampiasaina ho sakamalaho mba hanerena ny famotsorana ny rahalahiny sy ny hafa. Fotoana iray izay nandalovana ny fifanolanana ara-poko tamin'ny rafitry ny fonjan'i California.
Nisy ny fifampitifirana teo amin'i Jackson sy ny polisy izay nahafaty an'i Jackson, mpitsara Haley ary roa hafa maty.
Vokatry ny fandraisany azy dia voaenjika i Consort Angela fa niray tsikombakomba tamin'ny famonoana olona ary naharitra herintaona mahery tany am-ponja izy, talohan'ny nahazoana fiampangana azy tamin'ny 1972.
Fitondran-tena teo amin'ny fiainana taloha: I Angela Davis dia mpiaram-panjaka an'ny miaramila noho ny antony liberaly, toa an'i Harriet Tubman
Taorian'izay dia navotsotra avy tany am-ponja izy, fa mpanohana ny fandrosoana i Davis ary lasa kominista mihitsy aza. Nanohana ny mpitolona koa izy Party amerikana mainty amerikana mainty, izay ny tenany dia voarohirohy tamin'ny ady basy niaraka tamin'ny polisy ho fanoherana ny herisetra ataon'ny polisy amin'ny Blacks, indrindra any Oakland, California.
Ny Panther mainty dia mety ho an'ny mpiray tanindrazana amin'i Harriet Tubman avy amin'ny lalamby ambanin'ny tany.
I Angela Davis dia nikatsaka asa tao amin'ny akademisiana, ao amin'ny University of California, Los Angeles (UCLA).
Ireo tranga fanavaozana hafa dia manatevin-daharana ny mpitondra zon'ny sivily
Raha te hahalala momba ireo tranga niaina izay nahitana an'i Frederick Douglass, Henry Ward Beecher, Jon Stewart, August Wilson ary i Barack Obama, azafady, alaivo:
Etazonia Abolitionista sy mpiaro ny zon'ny sivily mpitarika ny raharaha fiainana taloha
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitovian-javatra eo amin'ny endri-tava tarihan'i Tubman sy Davis, na dia somary lava kely kokoa aza i Angela Davis raha ampitahaina amin'i Harriet Tubman.
Ny fomba hisehoantsika amin'ny fikaonan-jaza iray manokana dia faritan'ny maodelin'ny angovo atolotry ny fanahinao sy ny fototarazo nolovaina tamin'ny fianakavianao. Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, mandehana:
Ny fitsipiky ny Reincarnation: Fahatongavana ho an'ny vatana
Fiainana taloha, talenta, fahaiza-manao ary fitondran-tena: Nandefa ny fiainam-pitondran-tena nataon'i Harriet Tubman i Angela Davis.